तँ, तिमी, तपाईँ, हजुर ! - साउथ एशिया चेक
साउथ एशिया चेक / बुधबार, आश्विन २९, २०७६
तस्विरः साउथ एसिया चेक
अहिले नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रयोग भइरहेका आदरार्थी शब्द “तिमी” र “तपाईँ” लाई लिएर चर्चा चलिरहेको छ । हामीले यहाँ केही सञ्चारमाध्यमले चलाएका चलन बारेमा उल्लेख गरेका छौँ ।
कान्तिपुर दैनिकले २०६२ फागुनसम्म राजनीतिक दलका नेतालाई “तपाईँ” संबोधन गर्ने गरेको थियो । २०६३ भदौमा भने कान्तिपुरले “तिमी” संबोधन गरेको छ ।
यस हिसाबले हेर्दा उसले दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलका नेतालाई “तिमी” भनी संबोधन गर्न थालेजस्तो देखिन्छ ।
कम्युनिष्टहरूको प्रकाशन “मूल्यांकन” ले २०६० चैतमा विद्यार्थी नेतालाई “तिमी” र राजनीतिक दलका नेतालाई “तपाईँ” भनी दुईखाले संबोधन गरेको थियो ।
हिमाल खबरपत्रिकाले २०५६ मंसिर १६ देखि १९ को अंकमा राजनीतिक दलका नेतालाई “तपाईँ” संबोधन गरेको थियो भने २०५८ चैत १६ देखि ३१ को अंकमा “तिमी” संबोधन गरेको थियो । प्रशंशायोग्य काम गरेका मानिसका बारेमा लेखिने स्तम्भ “जनता” मा भने उसले अलि पहिलेदेखि नै “तिमी” संबोधन गरिआएको थियो ।
यसबाट के देखिन्छ भने हिमालले राजनीतिक दलका नेतालाई “तिमी” संबोधन गर्न दोस्रो जनआन्दोलनअघि नै थालेको थियो ।
उज्यालो रेडियो, टिभी र अनलाइनले भने केही अपवादलाई छाडेर अरूलाई “तपाईँ” भनी संबोधन गर्छ ।
बीबीसी नेपाली सेवाले राजनीतिक दलका नेताका बारेमा भन्नुपर्दा “तिमी” को संबोधन गर्छ । तर कुराकानी गर्दा भने उसले “तपाईँ” भनी संबोधन गर्ने गर्छ ।
कुरा गर्ने मान्छे आफू सामुन्ने हुँदा “तपाईँ” र ऊ ओझेल गर्दा “तिमी” भन्ने चलन बीबीसीको मात्र होइन । सेतोपाटी अनलाइन खबरजस्ता अनलाइनले पनि यसै गर्दै आएका छन् । उनीहरूले कुनै मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुपर्दा “तपाईँ” भनी संबोधन गर्छन् तर त्यही मन्त्रीका बारेमा लेख्नुपर्दा “तिमी” भन्ने गर्छन् ।
नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट् तथा नयाँ पत्रिकाले पनि राजनीतिक दलका नेतालाई “तिमी” को संबोधन गर्ने गर्छन् । तर यिनै संचारगृहले चलाएका कुराकानीमा ‘तपाई’ सम्बोधन गर्छन ।
नेपाली वृहत् शब्दकोशका अनुसार तिमीको अर्थ यस्तो छः द्वितीय पुरुष एकवचनमा प्रयोग हुने, तँभन्दा माथिल्लो र तपाईँभन्दा तल्लो श्रेणीको आदरार्थी शब्द । सोही शब्दकोशका अनुसार तपाईँको अर्थ यस्तो हुन्छः १. औपचारिक प्रसङ्गमा आफू भन्दा मान्य जनलाई ‘तिमी’ भन्दा माथिल्लो दर्जामा राखेर प्रयोग गरिने द्वितीय पुरुष एकवचनको आदरार्थी शब्द। (उदाहारण- यस उपलक्ष्यमा तपाईँको उपस्थिति प्रार्थनीय छ तपाईँ घरबाट कहिले पाल्नुभो?) । २. ‘तँ’- को सट्टा व्यङ्ग्यार्थमा प्रयुक्‍त हुने शब्द (उदाहारण- हो, तपाइँकै गोडा मिचेर बस्नुपर्ला!)।
हिउँद लाग्यो, हावामा विष थपियो हिउँद आउन लाग्यो । काठमाडौँमा हिउँद लाग्नु भनेको जाडो हुनु मात्र होइन । हामीले छिनछिनमा सास फेर्दा निल्ने प्राणवायुमा विष थपिनु पनि हो । नेपाल सरकारको वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक गोविन्द लामिछाने... विस्तारमा
अक्सिटोसिन जाँच्ने प्रविधि छैन् बजारमा पाइने तरकारी र फलफूलमा अक्सिटोसिन हर्मोन प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरा बेलाबेलामा सामाजिक संजालमा आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता कुरा भाइरल हुन्छन् । साउथ एसिया चेकले तरकारी र फलफूलमा यो हर्मोन प्रयोगस... विस्तारमा
आमाको नाममा सजिलै नागरिकता नदिने २५ देशमध्ये नेपाल पनि एक नेपालमा आमाका नामबाट नागरिकता दिने विषयलाई लिएर बहस चलिरहेका बेलामा साउथ एसिया चेकले विश्वमा लैङ्गिक समानता र नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बारेमा खोजेको छ । शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच... विस्तारमा